I-China indawo enkulu yephrojekthi yokushintshanisa umsebenzi wokwenziwa kwebhizinisi okwenziwa kuyo umshini wokukhiqiza impahla | UPijiang
Umsebenzi omkhulu we-turnkey Equipment turnkey
Iqembu le-PJM Brewery lihlanganisa amashumi eminyaka wesipiliyoni semishini yokwakha ubunjiniyela, ukwenziwa kwayo, inqubo yobunjiniyela, ukwakha amasistimu angenazihibe futhi kuhlanganisa nezinhlelo ze-automation & control. Iphrojekthi enkulu yokwehlisa utshwala. Okokusebenza kokuthungatha impahla kunomthamo waminyaka yonke wamathani ayi-2000, kufaka phakathi indlu ethengiswayo, ukufutshelwa, ukuthungwa, ukufakwa kwama-workshops, kanye nokusungulwa kwesikhungo sokulapha amanzi, isikhungo somthombo wokushisa, uhlelo lwe-CIP nelebhu esebenza ngochwepheshe, eneziqu ezihambisanayo ze-SC. Singumshini wemishini yokuphuza ubhiya, singafeza izidingo zakho zokwenza umsebenzi kufaka phakathi iphrojekthi yokuphehla ubhiya, ithangi elilodwa, ubhiya ophelile noma owenziwe ngokwezifiso.
Xhumana NAMUHLA KULULA KUPHEPHA I-PDF
Iqembu le-PJM Brewery lihlanganisa amashumi eminyaka wesipiliyoni semishini yokwakha ubunjiniyela, ukwenziwa kwayo, inqubo yobunjiniyela, ukwakha amasistimu angenazihibe futhi kuhlanganisa nezinhlelo ze-automation & control.
Iphrojekthi enkulu yokwehlisa utshwala. Okokusebenza kokuthungatha impahla kunomthamo waminyaka yonke wamathani ayi-2000, kufaka phakathi indlu ethengiswayo, ukufutshelwa, ukuthungwa, ukufakwa kwama-workshops, kanye nokusungulwa kwesikhungo sokulapha amanzi, isikhungo somthombo wokushisa, uhlelo lwe-CIP nelebhu esebenza ngochwepheshe, eneziqu ezihambisanayo ze-SC. Singumshini wemishini yokuphuza ubhiya, singafeza izidingo zakho zokwenza umsebenzi kufaka phakathi iphrojekthi yokuphehla ubhiya, ithangi elilodwa, ubhiya ophelile noma owenziwe ngokwezifiso.
1. Ukuqedwa, okusha, kanye nekhwalithi ephezulu.
2. Ukukhetha amasistimu asizayo womkhiqizo oholayo nowohanjiswayo.
3. Izinhlelo ezisizayo impilo ende, ukusebenza okuphezulu, ikhwalithi ephezulu, ukulahleka okuphansi.
4. Izinto eziqinisekisiwe zensimbi engenasici (304,316) zawo wonke amathangi.
5. Izesekeli zikagesi zifinyelela ku-UL, cUL, CE, PED, amazinga wokuthumela.
6. Ukusekela voltage asizayo uhlelo futhi imvamisa ukufanisa standard yakho ngqo.
7. Ubuchwepheshe obusha bokukhiqiza.
8. Ikhwalithi ezinzile, ukusebenza okuphezulu, ukulawulwa kwekhwalithi okuqinile.
9. Yonke imishini yamukelwa amalunga angama-100 we-TIG welded, mirror Polishing.
10. Izakhiwo ze-CAD, usizo lokufaka, umhlangano, ukuqeqeshwa. "
Le nkampani izimisele ukukhuthaza ubhiya omuhle ohlutshiwe, obumbene, ohlukene, onempilo futhi oluhlaza, njengesiphuzo sikazwelonke esingamukelwa futhi sidliwe ngumphakathi.
Ama-China akhiqiza umphakeli we-50L 100L mini conica ...
Imishini yokwenza umsebenzi wokubambisa ubhiya ka-2000l i-10BBl comm ...
I-othomathikhi enkulu yezimboni ezinkulu ze-Microbrewery j ...
Izisetshenziswa zikagesi ezingama-2000 amalitha we-microbrewery br ...
I-50bbL 500hl 5000l enkulu yotshwala bhiya isivuno esikhulu ...
imishini yokuphuza ubhiya i-conical beer Fermenter 2 ...